Izitayela zesiFulentshi zokugqoka zakudala azikho ngaphandle kokubheka njengesibonelo. Abesifazane baseFrance bahlale behle kakhulu, behlanzeka futhi besifazane. Akunandaba ukuthi yiziphi izingubo abazigqoka - nsuku zonke noma emikhosini. Awusoze wabona owesifazane ongumFulentshi egqoke kabi futhi enamahloni. Kubo bonke labo abafuna ukuba njalo babheke okuhle, iseluleko sethu.
Into yokuqala ehlukanisa isitayela saseFrance ezembatho ilula, ikhwalithi kanye nokuzikhandla. Ukusika okulula nokulula kwezinto kuvumelanisa ngokugcwele indwangu ebiza kakhulu, okuvela kuyo izingubo. Abesifazane baseFrance bathanda izinto ezinjalo zokugqoka, njengezinto ezivela ku-cashmere nesikhumba, izicathulo ezinezithende eziphakeme - konke lokhu kusiza ukubonakala kunhle kunoma yisiphi isimo.
Ngisho naseholidini, owesifazane ongumFrance akaze azivumele ukuthi abukeke kabi. Ukuya esitolo ukuthenga, ngeke neze agqoke ama-sneakers, i-jeans endala kanye nejezi eselulekile. AmaJeans azobe esexhaswe ngamabhuzu noma izicathulo eziphezulu, futhi amajezi, amasinki kanye nama-tracksuits agcinwe ukuvotela kuphela. Uma ufuna ukubukeka njengomParisisi weqiniso, - kufanele uhambisane nalo mthetho.
Isisekelo sesitayela saseFrance singokwemvelo kukho konke. Izakhamuzi zaleli zwe elihle zikhetha izindwangu zemvelo, imibala enokuthula, evinjiwe. Ngeke ubone owesifazane ongumFulentshi weqiniso ogqoke imibala ekhala. Ubuningi bamasongo, amaketanga, ubuhlalu, ngokujwayelekile - imihlobiso - nayo iyindlela yokugqoka. Esikhundleni salokho, kuthuthwa imibala yobudala, engazange ivele imfashini - imfucuza, i-burgundy, eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama, ebomvu nokuhlanganiswa kwayo. Imihlobiso - ubuncane, kodwa konke kukhethwe ngokucophelela futhi kuvumelanisa ngokuhambisana nezingubo. Imibala ejwayelekile yokugqoka ingahle "ihlanjululwe" nge-accessory ekhanyayo - isibonelo, isikhafu sentamo - ngaleyo ndlela yenza iphutha. Kulesi simo, akudingekile ukuthenga ubucwebe obubi: into eyinhloko yizinto zokufinyelela ezingavamile.
Gqoka njenge "konke" futhi uhlangane nesixuku - lokhu akuyona yowesifazane ongumFulentshi wangempela. Esikhundleni salokho, ukhetha ukuthi yini eyoyiqokomisa, ngokushesha imdonsa futhi igcizelele ubuntu bayo. Ngakho-ke, uma ufuna ukubheka okuhle - zama ukungazithengi izingubo ezingatholakala kulabo besifazane abambalwa. Uma lokhu kwenzeka okwamanje (empeleni manje izinto zithengwa ezitolo ongavakashelanga wena kuphela, kodwa okungenani bonke abangane bakho) - yenza iphutha elingavamile emfanekisweni oyokunika ubukhulu obukhulu.
Izembatho zesitayela seFrance esiyingqayizivele - ikakhulukazi zigcinwe emathonini ethule, kodwa izesekeli zingakhethwa ezikhanyayo nezokuqala, futhi akudingekile ukuthi zikhona ohlelweni olufanayo lombala nesigqoko. into esemqoka - inhlanganisela ehambisanayo, noma ngezinye izikhathi engalindelekile.
I-Frenchwoman ngokumelene nezimpumputhe zilandela imfashini. Baqiniseka ngokujulile ukuthi akuzona zonke izinto ezivela ekuqoqweni kwakamuva okwenza owesifazane abe nenhle, kodwa, ngaphezu kwakho konke, ubuntu bakhe. Khetha okulungile kuwe, kubonakalisa umhlaba wakho wangaphakathi bese ugcizelela ubuhle. Hlala ekunambeni kwakho, umqondo wakho wesitayela, izici zokubukeka kwakho - futhi uzohlale ubheka okukhanyayo nenhle.
Ukugqoka kwekhanda nokwenza isitayela sesiFulentshi kuqhathaniswa nobuhle obunqatshelwe. Ikhanda lezinwele ngeke libe linkimbinkimbi futhi libuciko, futhi lenze-up - ukumemeza. Ngisho nezindebe ezibomvu ezikhanyayo, umFulentshi uzobukeka engokwemvelo. Imfihlo ikhona emdlalweni we-halftone odala umqondo wokuphelele, okwenza kube nokho ukunakwa kwezici zobuso.
Kodwa nokho into esemqoka ehlukanisa isitayela sezingubo zesiFulentshi ukukhathazeka okukhulu okukhokhelwe yonke imininingwane yesithombe. Ukufunda ukuhlanganisa ngokufanele izinto, ukuthatha izesekeli, ugcizelele ukuzikhethela kwabo, intombazane ngayinye ingabonakala sengathi ibuya eParis. Ukunemba kuzo zonke izinto, ukuhlanzeka, okulula, kodwa ngesikhathi esisodwa - ukugcizelela imininingwane - yilokhu okuhlukanisa isitayela saseFrance ezembatho. Ngaphezu kwalokho, konke kuphelele "ezintweni ezincane" ezinjenge-manicure nokuhamba nge-pedicure. Uma ufuna ukubukeka kahle - ngoba awamukeleki "ukunethezeka", njenge-polished nail epholile. Isitayela saseFrance sikhombisa ukuthi konke kufanele kube kuhle intombazane.
Njengoba ubona, isitayela sesiFulentshi sezingubo izingubo zilula futhi zinhle, futhi ngenxa yokungabi khona kwemibala yokukhala, ubujamo obuyinkimbinkimbi kanye nokugcizelela ekuziphatheni komuntu ngeke kuphelelwe yimfashini. Lesi yisisombululo esihle kunazo zonke kulabo abafuna ukuhlale bebukeka behle futhi begqoka ngothando. Intombazane egqoke ngokulandela amasiko wesitayela sesiFulentshi, akunakwenzeka ukuba ungaboni esixukwini. Manje uyazi konke mayelana nesitayela seFrance esiyingqayizivele, kodwa akufanele sikhohlwe ukuthi akwanele ukuthi nje ugqoke kahle - kufanele ukwazi ukugqoka izinto. Ngakho-ke ungakhohlwa ngokuma okuhle, ukuhleleka okulula nokuziphatha okuhle. Khona-ke uyohlale uveza umbono omuhle futhi ubonakala sengathi ungumParisisi weqiniso.
Okuthakazelisa kakhulu ngefashini
Yiziphi izingubo ezikhuthaza ukuzihlonipha ngokwabo
Yiziphi izingubo ezimfashini zowesifazane omncane
Izimonyo ezintsha zesikhumba
Jamu kusuka kuma-apula (Kiev)
I-pine nut: izakhiwo zokwelapha
Indlela yokwenza izinwele ezincane zibe zikhulu
UMkhandlu - indlela yokuziphatha emsebenzini omusha
I-Laurent pie nenkukhu, amakhowe kanye ne-broccoli
U-Natalia Podolskaya walahlekelwa isisindo ngemuva kokubeletha
Okuzilibazisa kwami ​​kuyi-skating roller
Kozinaki nge imbewu ithanga